I-Dima Bilan namanye amamodeli angewona ochwepheshe embukisweni we-Emporio Armani
Imfashini Yabesifazane Izindaba Zefashini
Ehholo lokubonisa i-GUM yaseMoscow ngohlaka lwe-Bosco Fashion Week, kwaqoqwa iqoqo lasehlobo lika-2015 Emporio Armani "Avangard". Njengamamodeli emgwaqeni, abanye abantu abawaziwa nabo babezimele, embonini yefashini ngaphambili yayiphathwa nje kuphela njengamakhasimende nabathengi. Isibonelo, uDima Bilan noma indodakazi yomhleli-inhloko yomagazini weGlamor Veronika Fedorova.
Iphalethi yendabuko emnyama neyomhlophe yalesi sikhangiso ihlanjululwe ngalesi sikhathi nge-shades eminingi eluhlaza okwesibhakabhaka - kusukela ku-ultramarine kuya kumbane kagesi. Futhi ukushaya ngokucacile okuphambene okushicilelwe, ikakhulukazi iJomethri, ephefumlelwe inkathi ye-avant-garde. Noma kunjalo, akukho umkhawulo wombala olinganiselwe, futhi ukungafani nokubukeka kwamaprinta kunciphisa ukuqoqwa komzwelo wokuphumula okunye, okuholela ekukhunjweni kokuphumula kolwandle.
Ngokusobala, izinhlangano zeholidini ziye zinciphisa ama-pantalli ebanzi futhi, ngokuphambene nalokho, zahlukanisa izikhwama ezidabukile, izingubo ezimfushane namajeketi ezinqunyiwe zakudala, kanye nezindwangu ezinomphumela wensimbi kanye ne-organza elula. Amabhomu kanye nama-jumpers, amajackethi namagebengu abuza nje kusukela ekubonisweni kwe-Emporio Armani ku-suitcase yeholide ...
E-Iraq, kuboniswe umbukiso wefashini. Ngokokuqala ngqa eminyakeni engu-30
Isitolo esikhulu seMango eYurophu savulwa eYurophu
I-star stylist U-Bee Akerlund waba umklami wezesekeli
Izindwangu zemizimba 2009
I-Victoria's Secret ine "ingelosi" entsha
Umculi waseMelika uKeshiya Kumari usolwa ngokugwaza uVercece
Isithonjana sesitayela: iqoqo elihlangene likaKarine Roitfeld x Uniqlo
Ilungu elikhulile nelingasokile: izici eziyinhloko
I-Horoscope yamanzi-inhlanzi ngo-June 2017
Yeka indoda ecebile efuna owesifazane emshadweni
Okusizayo futhi kusivimbela ukuphumula kwethu
UMichael Douglas ulwa nomdlavuza futhi, odokotela banikeza umlingisi izinyanga eziyisithupha
Ikhetha ubhiya be-Czech
Kungani amadoda ethandana ngokobulili obudala?
Iyiphi indima indima edlala emzimbeni womuntu?
Indlela ukuhlobisa izibuko zomshado: imibono yokuqala yokuhlobisa
Ukulungiselela abesifazane abakhulelwe ukubeletha
Amaqiniso anentshisekelo mayelana nokuphila kwezinkanyezi
Amazambane abhakabhaka aqoshiwe ngebhethoni
Ukwazi nge-cardigan ukuqoqa izinaliti - amamodeli ngamaphethini
Oat ebhaka kuhhavini